सबैभन्दा असामान्य र हडताली एक भित्री को शैलीहरू kitsch छ। यो के हो? Kitsch - जसको अर्थ छद्म, tastelessness जर्मन भाषा, देखि गत शताब्दीको हामीलाई आएको शब्द। को भित्री यस्तो क्षेत्रको प्रतिध्वनिहरु यो एक समयमा हुन्छ, कुनै पनि उमेर मा देख्न सकिन्छ नया, अझै परम्परा पारंपरिक प्रतिस्थापन गर्न स्थापित गरेको छ जब छैन। शैली kitsch भित्री आधुनिक, जसबाट एक टुकडी incongruous वस्तुहरु र रंग पहिले नै स्वाद को कमी को छाप भालु भनेर सिर्जना संग क्लासिक तत्व को संयोजन गरेर विशेषता छ।
Kitsch - अपार्टमेंट, अनुपात र स्वाद को आफ्नो भावना को मालिक को स्वभाव र चरित्र निर्भर असीम कल्पना छ। त्यहाँ बिल्कुल कुनै नियम छ। तपाईं गरिनेछ सक्षम गर्न बुझ्न आफै, तिर्ने ध्यान गर्न फोटो - kitsch गर्दैन पहिचान कुनै पनि को नियम। यो सबैभन्दा आधारभूत सौंदर्य मानहरू र एकै समयमा सबैभन्दा आक्रामक manifestations primitivization vulgarization र लोकप्रिय कला मध्ये एक मा अधिकतम विचलन छ।
धन र kitsch को शैली मा भित्री
यो भित्री शैली दुई तरिकामा प्रकट भएको छ। पहिलो - यो छ एक प्रयास गर्न डिजाइन कोठा को कुनै पनि प्रकारको मा psevdoroskoshnom शैली, कुनै पनि अन्य निर्देशन। मूर्तिहरु, चित्रहरू आफ्नो नकलीपन जोड कि आधुनिक सामाग्री र प्रविधिको प्रयोग गरिएका छन्: यस मामला मा, आधारभूत तत्व प्रतिहरू र क्लासिक काम Forgeries छन्। प्लास्टिक र मखमल, घर थिएटर र ग्रीक मूर्तिहरु को एउटै कोठामा उपस्थिति आपसमा inconsistency वस्तुहरूको छाप reinforces।
दोस्रो व्यक्ति - को खिसी एक प्रकारको लोकप्रिय संस्कृति। यो मामला, आधारभूत आवश्यकता छ अधिकतम प्रयोग incongruous वस्तुहरू। यस मामला मा, kitsch - छैन सौंदर्य अर्थमा, र सामान, सजावटी तत्व र सामाग्री को विशेष डिजाइन neorganichno टुकडी जगाउन गर्न लक्ष्य छ।
kitsch शैली को प्रकटीकरण
को भित्री सबैभन्दा अवस्थामा kitsch शैली छ निम्नलिखित मा प्रकट:
प्रयोग को संयोजन को सामाग्री छन् मान्यता unaesthetic कला: प्लास्टिक संग रेशम, संगमरमर तल, जो मेड अप एक फर कम्बल र जस्तै।
विशेष विभिन्न ruches, रिबन, हृदय, भव्य खिलौने र त्यस्तै knickknacks एक अतिरिक्त सिर्जना गरियो।
उपलब्ध सतह भन्दा लागू हुन्छ जो मुलम्मा एक ठूलो संख्या।
Raznokomplektnaya फर्नीचर वा प्राचीन संग आधुनिक कार्यालय संयोजन।
सुकेको वा प्लास्टिक फूल को एक ठूलो संख्या।
कृत्रिम फर एक सोफा कवर वा गलैँचा रूपमा प्रयोग भएको छ जो।
ध्यान आकर्षित गर्ने अत्यन्तै उज्ज्वल रंग, साथै हरियो र जस्ता, बैजनी हरियो र गुलाबी, बैजनी संग नीलो रातो, पहेंलो को संयोजन।
यो भित्री डिजाइन को सबै भन्दा विवादास्पद र अस्पष्ट कथित निर्देशन छ - त्यसैले, माथि माथि संक्षेप, हामी kitsch शैली भनेर भन्न सकिन्छ।
खैरो भान्सा: डिजाइन विचार
छोराछोरीको दुई केटाहरु। दुई केटाहरु लागि भित्री नर्सरी
पायलट-एसे अर्नस्ट उडेट: जीवनी
निजी घरमा को छतों को प्रकार: सुविधाहरू के-के हुन्?
Elena Temnikova - सुनको अल्टो "अमेरिकी आइडल"
Baluster - एक रूख देखि एक baluster ...
"Petchenkin": स्वादिष्ट सलाद (नुस्खा)
व्यक्तिगत जानकारी फेसबुक कस्तो यसका प्रयोगकर्ताहरूको थाह छ